Global Voices teny Malagasy » Adin-Tenirohy: Mametraka an-tSarintany ny Resaka an-tSerasera Miompana amin’ny Fiakaran’ny Vidin’ny Etona Tao Meksika · Global Voices teny Malagasy » Print
Adin-Tenirohy: Mametraka an-tSarintany ny Resaka an-tSerasera Miompana amin'ny Fiakaran'ny Vidin'ny Etona Tao Meksika
Voadika ny 02 Marsa 2017 13:29 GMT 1	 · Mpanoratra Signa Lab Nandika (en) i Meghan McDonald, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Meksika, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika
Tirakitera iray manohitra ny “gasolinazo.” Sary avy amin'i Thelmadatter via Wikimedia (CC BY-SA 4.0)
Noho ny fiakaran'ny vidin'ny gazoala tao Meksika, niely ny rotaka ara-tsosialy  ary manao izay handrenesana azy araka izay azony natao ny olona na taiza na taiza nisy an-dry zareo: eny an-dalambe, eny am-pivarotana kafe ary nanerana ny media sosialy.
Nahatratra hatramin'ny 20%  ny fiakaran'ny vidin'ny akoran'afo  – fantatra amin'ny anarana hoe gasolinazo – tamin'ny alin'ny voalohany Janoary. Niteraka fanoherana teny an-dalambe sy an-tserasera isan'andro izany toe-javatra izany.
Nandritra ireny fihetsiketsehana ireny, sady nampiasaina ho fanamafisam-peo ny Twitter no natao ho sehatra hanehoan'ny olona ny fahatezerany sy ny tsi-fahafaliany. Saingy, nitombo tao amin'ny habaka ny fisarahan-kevitra sy ny fifandirana, ary toy izany ihany koa ny fampielezam-baovao tsy marina.
“Tanora mitondra fantsona sy antsy mihazakazaka manavatsava ny lalan'i Tultepec, #EdoMex” Sioka voafafa avy amin'ny Grupo Formula, niaraka tamin'ny sary iray avy any Ejipta, izay hita ery aoriandriana ety ny soratra amin'ny teny arabo.
Iray amin'ny toe-javatra lehibe tsikaritra tamin'ity fifandonana ity ny fielezan'ny tsaho sy ny tenirohy mampiroborobo ny zavatra tsy ara-dalàna tahaka ny fandrobana sy ny halatra. Roa ny zava-kendren'ireo tetipanorona ireo: hamily ny resaka sy hanaratsy endrika ny fihetsiketseham-panoherana. Nisy mihitsy aza moa hafatra manaitaitra nampiarahana tamin'ny toe-javatra sy fihetsiketsehana hafa, tahaka ny sioka efa nofafana hitantsika io anila io, izay navoakan'ny Radio Fórmula  izay nohamafisin'ny mpanamarim-baovao taty aoriana fa toe-javatra niseho tany Ejipta.
Ny sasany amin'ireo kaonty tafiditra anaty finiavana handiso vaovao ireo dia fantatra ho bots na boto (kaonty mpitoratoraka ho azy) na mpandoto rindrina izay efa voasaringotra amin'ny fanohintohinana sy fandrahonana mpanao gazety sy mpikatroka ara-tsosialy.
Ny paikadin'ireo kaonty ireo dia ny hanova endrika ny resaka an-tserasera tsotra amin'ny alalan'ny lohahevitra malaza, mitsabana ao anaty fifanakalozan-dresaka. Efa nampiasaina imbetsaka hampihena na hanova ny resaka tsy dia mety loatra amin'ny vondron'olona sasantsasany eo amin'ny fahiefana izany karazana tetipanorona izany.
#SaqueaUnWalmart (Mandroba Walmart Iray)
Nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny 4 janoary 2017, tenirohy roa no nampiasaina: ny #Gasolinazo  sy ny #SaqueaUnWalmart  (Mandroba Walmart Iray), izay nitombo ho lohahevitra nironana tao Meksika. Ny sary manaraka eto ambany no mampiseho ny fifandraisana eo amin'ny tenirohy isankarazany niseho tao anaty sioka tamin'io daty io. Ny rohy hita amin'ireo tenirohy ireo dia mampiseho ny isan'ny fotoana nampiasaina ny tenirohy roa na mihoatra tao anaty sioka iray, ary ny haben'ny teboka tsirairay dia mampiseho ny hatetehan'ny fampiasana ny tenirohy tsirairay. Ity famakafakana ity dia teraka avy amin'ny sioka mihoatra ny 15.000 notrohina, nivoaka ary nampitain'ny kaonty mihoatra ny 10.000.
Eto isika mahita ny halehiben'ny #Gasolinazo sy ny fifandraisany tamin'ireo tenirohy hafa nampiasaina tamin'io andro io. Azo vakiana ho karazana fikitra ao anaty rafitra ny fivoahan'ny #SaqueaUnWalmart, fitsofohana tsy araka ny tokony ho izy miraikitra amin'ny #Gasolinazo mba hahazo laza sy hahenika ny resaka tsotra nifanaovana.
Ny kisarisary ihany koa no mamela antsika hanondro ireo tenirohy hafa nampiarahana tamin'ny #SaqueaUnWalmart, izay mampihevitra fa tetipanorona nampiasaina io hidirana tao anatin'ny resaka. Niavaka manokana tamin'izany ny tenirohy #Hail100cia (filalaovanteny midika hoe “hail ciencia” na “arahabaina ny siansa”). Io tenirohy io dia nampiarahana tamin'ny vondron-kaonty mpisera Twitter nifandrindra tamin'ny fivoahan'ny #SaqueaUnWalmart ary niroso tamin'ny famoahana ny tenirohy vaovao toy ny #GolpeDeEstadoMX  (Fanonganam-panjakana ao amin'i Fanjakan'i Mexico).
Mba hamantarana tokoa ny tena herin'ny tenirohy ao anatin'ny resaka irey, dia nanaovana famakafakana sy soritra an-tsary ireo kaonty navitrika tamin'ireo tenirohy roa ireo. Izany no ahafahantsika mahita hoe iza no mamoaka ny hafatra ary iza no mpihaino azy ireo. Ahitana izany fifandraisana izany ny kisarisary manaraka. Ny haben'ny teboka (vona) dia miankina amin'ny isan'ny nikitihana (nanononana) ny anaran'ny mpisera iray tao anatin'ny resaka nahitana tenirohy #Gasolinazo sy #SaqueaUnWalmart — arakaraka ny isan'ny fikitihana (fanononana) no mahalehibe ny teboka (vona).
Ireo vondrom-piarahamonina mavitrika dia ahitana ireo fampitam-baovao mahazatra mitatitra ny fiakaran'ny vidin'ny etona, ka tonga amin'ireo fikambanan'olona manokana — ka eto amin'ity raharaha ity dia ilay vondrona namelona ny tenirohy #SaqueaUnWalmart.
Raha topaza-maso voalohany dia sarotra ny mahita ny fifandraisana eo amin'ireo kaonty volazana ao anatin'ireo kaonty mavitrika maro nandray ny #Gasolinazo, saingy ny sary manaraka no mampiseho fa misy vondrona #SaqueaUnWalmart miezaka ny hampifandray azy ireo amin'ny #Gasolinazo mba hahatonga ny tenirohin'izy ireo ho lohahevitra misongadina.
Ny vondrom-piarahamonina asongadina amin'ny loko mena amin'ny kisarisary etsy ambony dia manondro ireo vondrona kaonty mavitrika mampiasa ny tenirohy #Hail100cia. Io ihany ilay vondrona mpisera (mpandoto rindrina sy mpitoratoraka na “bots”) nanapaka ny resaka tsotra niompana amin'ny #Gasolinazo ka nampiditra ny hafatra #SaqueaUnWalmart. Io vondrona io anefa dia misolotena ny 4,19% monja amin'ireo kaonty mavitrika (miisa 5302 ny fitambaran'isan'ireo nampiasa ny #Gasolinazo sy #SaqueaUnWalmart). Saingy, na dia eo aza ny fahavitsiany, ny fanafihana nataon-dry zareo amin'ny fampiasana ny setriny sy ny kitika hampiasa betsaka araka izay tratra ny #SaqueaUnWalmart ka lasa nisy fiantraikany tamin'ny resaka tsotra.
Ny fikirakirana ny fironana ao anatin'ny resaka manerantany dia tsy misarika ny saina fotsiny ihany, fa “mampibontsina” na “mampihena” ny resaka sy ny tsindry ataon'ny tena mpikatroka amin'ny governemanta na amin'ny olo-malaza sasantsasany. Raha tsy hoe tsy ara-dalàna izany karazam-paikady izany dia maneho endrika haika vaovao amin'ny fampiasana ny sehatra nomerika hanaovana kabary hita'ny daholobe.
Misy ihany koa ireo fanontaniana mipoitra rehefa fantatra ireo lalana, tetipanorona ary kaonty ireo. Voalohany, inona no hery manetsika amin'ny fanintonana ny resaka ho any amin'ny lalana iray? Faharoa, inona ny tombontsoan'ny olona na vondron'olona amin'ny fanaovana izany karazam-pihetsika izany? Fahatelo, inona ny drafitra lavitr'ezaka ao amin-dry zareo? Ary farany, inona ny karazana fomba fiasa azo velarina hampihenana na hampitonena ilay fanovana nataon'olombelona amin'ny fironan-dresaka?
Adidy mihitsy tao anatin'izay andro maromaro izay ny mitady ny tena fanontaniana sy ny mitozo amin'izany lalana izany. Herintaona sisa dia ho tonga ny fifidianana federaly ao Meksika, ary mety ho lasa vetivety dia sahan'adin-dresaka eo amin'ny kabary sy ny fiarahamonina, mitati-baovao, mpikatroka ary ny mpamakafaka mora foana ny media sosialy. Ary ny mihoatra noho izany, lasa fanamby ny manorina sehatra mitsikera, mangarahara ary matanjaka.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/02/95731/
 rotaka ara-tsosialy: https://globalvoices.org/2017/01/07/gasolinazo-how-gasoline-price-gouging-has-spurred-collective-bad-temperedness-in-mexico/
 hatramin'ny 20%: http://www.milenio.com/negocios/enero-precios_gasolina-alza_combustibles-shcp-cre-aumentos-milenio_0_874112603.html
 fiakaran'ny vidin'ny akoran'afo: http://www.globalpetrolprices.com/Mexico/gasoline_prices/